Ajjeechaan Oromoo Dhaabbachuu Qaba! – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooAjjeechaan Oromoo Dhaabbachuu Qaba!
Damee Boruutin, Waxabajjii 14, 2018
Mootummaa jechuun biyya lafaa kana irratti mootummaa sirna kam iyyuu haa tahu (abbaa irree ykn dimookraasii) kan uummatan bushaaan jira jedhuu irra humna halagaa alaa dhufee weeraru irraa tiksuu fi daangaa biyyaa eeguu dha. Amma haalli kun lamaan hin guunne mootummaa jedhamuu hin danda’amu. Amma weerara alaa irraa ittisee dangaa biyyaa kabachiisee jiraate yoo haqa uummataa eeguu dhiisee dhidhiitee irra deeme iyyuu mootuma tahuun isaa hin hafu. Uummatni didhiitamee tole jedhee yoo bitameef rakkina isaa ti. Kan Uummata Oromoo baayyee kan nama ajaa’ibu dha. Humni ormi daangaa cabsee dhufee yaroo uummata keenya milliyoonaan qe’ee isaa irraa buqqisuu fi kumaatamaan ajjeessaa jiru mootummaa Oromiyaa wabna jennee dubbachuun qaanii guddaa dha.
OPDOn waggaa 27 ol mootummaa Oromiyaa of haa mogaaftu malee takka iyyuu mootummaa tahuu miti mootummaa fakkaatee iyyuu hin argamne. Bara dheera kana keessa guyyaan daangaa Oromiyaa tikstee fi mirga Uummata Oromoo kabachiifte hin jiru. OPDOn meeshaa fardaa TPLF yaabattee Uummata Oromoon gulftu dha. Bara dheeraa kana TPLF tajaajjilaa fi harcaa’aa ishee funaanachaa yoona geese. Bara kana TPLF badii jalaa baraaruuf jecha gara fuula duraa dabrtee na argaa , na argaa jechaa jirti. Waan haaraa maal argina? Shira TPLF wajjin xaxxuun ummatni keenyaa waraana Liyuu Haayilii fi Agaaziin guyyaa guyyaan akka dhumu gochaa jirti. Manni uummata keenya irratti gubachaa fi jireenyi isaa barbadaa’ee kan lubbuun hafee jireenya gadadoo fi hiyyummaaf saaxilamaa jira.
Uummata Oromoo Bahaa, Kibaa fi Kiba Bahaa maqaa Liyuu Haayiliin waraanni Wayyaanee hammeenya dhaga’amee hin beekne rawwachaa jira. Ijaarsi mirga dhala namaa falmatu (Amnesty International) akka waraanni Liyuu Haayilii kun diigamee warri namoota nagaa gidiraa agrsiisaa jiran akka seeratti dhiyyaatan deddeebisee yoo gaafatu, Mootummaan Oromiyaa fi Itoophiyaa warri ofiin jedhan dhaga’uufuuf fedha hin qaban. Sababni isaa kan waraana kana qindeesse uummata Oromoo irratti bobbaasaa jiru isaan waan tahaniif.
Karaa tokko qaanii malee mootummaa yaroo ofiin jedhan uummata Oromoof tuffii guddaa akka qaban agrsiisa. Karaa biraa bara kana Mootummaa Oromiyyaa qofa utuu hin taane Mootummaa Itoophiyaa illee of harkaa kan qabu OPDO dha jedhanii weedisaa oolu. Garuu dhumaatii Oromoo bakka hundatti tahaa jiruuf itti gaafatama guddaa akka qaban itti hin mul’atu. Warri sobaa fi fakkeessuun umurii isaan guutuu jiraachuuf yaadan kun utuu waggaa tokko illee gara fuula duraa hin tarkaafannee uummata bal’aa duratti saaxila of baasanii jiru. Warri kun afshaalummaa fi malaamalltummaan TPLF yakka uummata irratti raawwataa turte jalaa akka milqittu gochaa jiru. Isa Kanaan dura jidduu deemtuu tahanii lafa Oromoo TPLF iif gurguraa turan har’a itti darbanii maqaa kondomiiniyemii fi investiimentii gabaa o’aa keessa jiru.
Fakkeessaa fi drama OPDO saaxila baasuuf amma nuuf danda’ame yaaleera. Karaa tokkoon ayyaana-laallatoonni lubbuun ummata keenyaa akka baalaa utuu harcaa’aa jiru waan xiqqoo keessaa butachuuf mangudoonni illee utuu hin haafiin koomee irra wal ejjechaa jala figaa jiru. Uummatni Oromoo nagahee jechaa jira. Yaroo akkasi muddaa tahe kana keessa rakkina uumataatti daldaluuf fiiguu dhiisanii suuta suuta ilaalataa yoo deeman wayyaaf. OPDO wajjin boola galuuf yoo tahe malee gatiitti uummata Oromoo irra abadan lamuu taa’uuf hin jiranii.
Karaa hundaan kan ragaan argaa jirru hojii OPDO afaaniin waan dhimma uummtaaf dhaabbatan fakkeessaa jilbeefatee TPLFiif hojjechaa jiraachuu ishee ti. Namoota dhiiga uummatan harka dhiqate warra akka Getachoo Assafa, J. Samooraa Yunus, Abbaa Dulaa Gamadaa akka seera jalaa baqatan gochuu caalaa gargaarsi diinaaf godhamu hin jiru. Warra qabeenya biyyaa saamee biyya deegse bakka tokkoo kaasanii bakka biraa kaa’uun uummata irratti cubbuu guddaa hojjechuu dha. Inni dhoksaan saaman xiqqaatee har’a Mootummaan EPRDF seeraan TPLF qabeenya biyyaa kan tahe kan akka Ethiopian airlines, Telecom, warshaa sukkaraa fi warra hafan hundaa akka bitatuuf ayyaana kennaaf jira. Maqaa isaaniinis tahee maqaa faranjiin yoo bitatan abbaa qabeenya keenyaa tahuu akka hin dandeenye ammumaa kaasanii beekuu qabu. Muumicha Ministeeraa kan muddatee achi irra keewwate TPLF malee uummata Oromoo miti. Qabeenya Uummata Oromoo kan gurguruu danda’u Mootummaa Oromoo qofa.
Waraanni Uummata Oromoo irratti deemaa jiru kan qindeessee oofaa jiru TPLF jennee iyyaa jirra. Bakka Liyuu Poolisiin deemuu dandeessuu hundaa maqaa Liyuu Haaili Poolisii jedhuun kan uummata keenya ajjeesaa jiru waraana Wayyaane akka tahe uummatni bareechee beeka. Oromiyaa Kibaa poolissiin Liyuu Haayili dhaqaa waan hin dandeenyeef maqaa hidhatoota Afaariin uumata keenya goolaa jiru. Dhihaa fi jiddduu galeessa Oromiyyaa waan sababa godhatan waan hin jirreef ifa bahee kan Uummata Oromoo ajjeesaa jiru poolisii Oromiyaa fi Kora bitinneessa Oromoo akka tahe raga ijaan agarru.
Haalli kun kan mirkaneessu waraana qindaa’e kan Uummata irratti raawwachaa jiru OPDO fi TPLF akka tahe dha. Waraanni uummata keenya irratti deemaa jiru OPDO fi TPLF kadhachuu fi gaafachuun hin dhaabbatu. Biyyi olaa illee nuuf dirmatee nu irraa dhaabuuf hin danda’u. UN (United Nations) illee wayyoo uummatni Oromoo garamalee dhumaa jira jedhee nuuf hin qaqqabu. Ajjeechaa Oromoo dhaabuuf danadeettii fi humna kan qabu tokkicha Uummata Oromoo qofa. Uummatni Oromoo ajjechaa kana halkan tokko itti dhaabuuf humna isa irraa hafee biyya Afrikaaf gahu qaba.
Diina isaa kana wal jalaa booda of keessaa haxxa’ee baasuu malee filmaata biraa hin qabu. Diinni duraa TPLF haa jennu malee warri afaan isaa dubbatanii, isa fakkaatanii TPLF wajjin hojjetanitu gaagama guddaa itti fidaa jiru. Isaan kana dura dha’uun gaaffii hin qabu. Qabeenya diina kan tahe hunda barbadeessuu yookan tuhannaa uummataa jala olchuun barbaachisaa dha. Diinni keenya waan hammeenyaan guutamee jiruuf hiluufiin deebisee nu miidha. Karaa danda’uun hundaan nu dhabamsiisuu waan barbaadaniif jecha garaa jabaannee of irratti barbadeessuu qabna. Uummatni keenya OPDO fi TPLF loluuf galaa galaafatee lolaaf maca deemaa hin jiru. Isaanitu waraana fidee qee’ee keenya nuuf dhufaa jira. Diina nu miidhuuf nutti dhufu of irraa ittisuun seera biyyaa lafaanis tahee karaa Waaqaan eebisamaa dha.
Lukkeen diinaa OPDOn uummata keenya afaanfajjeessuu fi mogolee buusuuf waan hin odeessinee fi hin sobne hin qabdu. Warra afaan damma godhee uummata guyyaa guyyaan ajjeesaa fi ajjeesisaa jiru kanaaf dhiifama gochuu biraa darbuu qabna. Dongoraa oofaa jiran jalaa baannee ajjeechaan Oromoo akka hatattamaan dhaabbatu gochuuf Uummatni Oromoo dirqama qaba. Karaa qindaa’een WBO fi QBO wajjin hiriira galee warra Oromoo ajjeesu kana of irraa ajjeesuuf mirga qaba. Uummatni Oromoo diina isa irra jiru kana of irraa kaasuuf taankii fi madaafa isaa hin barbaachisu. Meeshaan uumaan qabu isa gaha. Diinn isaa eenyu akka tahe bareechee hubatee jira. Kan isa hafe qophaa’ee, qindaa’ee irree tokkoon muratee ka’uu qofa.
Singitan chawaka says:
Yeroo ammaa kanatti haala kanaan mootummaa keenya balaaleffachuun nu hin barbaachisu! Aarsaa kaffaluu yoo ta’e inni kanaan duraa nu gaha. Kana booda Moorummaa keenya cinaa dhaabbannee injifannoo arganne tikfachuu qabna.